မှု့ခင်းသတင်း Archives - Uptodate MM
မင်းသမီး ပွင့်နဒီမောင်ရဲ့ အိမ်ပေါ်ကနေ မီးခံသေတ္တာ အလုံးလိုက် မပြေးတဲ့ သူခိုး
27ရက်နေ့ည2:00မှာအိမ်ထဲဝင်ဖောက်သွားတဲ့သူခိုလူတွေအကုန်အိပ်နေချိန်တယောက်ထဲသူ့အိမ်သူ့ရာလိုအေးအေးဆေးဆေးဝင်ဖောက်တာ။ မီးခံသေတ္တာ ကိုအလုံးလိုက်မသွားတာ။ အိမ်မှာလူအိပ်တဲ့ အခန်းတွေကလွဲလို့ တစ်အိမ်လုံးကို စိတ်ကြိုက်ဖွသွားတယ်။ တစ်အိမ်လုံးတစ်ယောက်မနိုးလို့။ တစ်ယောက် သာ နိုးရင်သတ်သွားမှာသေချာတယ်။ သွေးအေးအေးနဲ့cctv ကိုတောင် မျက်နှာက်ို လက်နဲ့အုပ်ပီး မော့ကြည့် သွားသေးတယ်။ ကျမဒီ သုဝဏ္ဏ ဗိုလ်ချုပ်ရွာ […]
လောင်းကစား လုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် အပိုင် စခန်းမှူးနှင့်နယ်ထိန်းကို အရေးယူမည်
By Uptodate MMPosted on May 22, 2019
လောင်းကစားဝိုင်း ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ ရှိလျှင် စခန်းမှူးနှင့် နယ်ထိန်း ကို အရေး ယူမည် ပဲခူးတိုင်း မြို့နယ်များရှိ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာ များတွင် လောင်းကစား လုပ်နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ ရှိ လျှင် […]
အဖေအရင်းဖြစ်သူမှ (၁၅)နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းအားကိုယ်ဝန်(၄)လ ရှိသည်ထိ အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု
By Uptodate MMPosted on May 19, 2019
အဖေအရင်းဖြစ်သူမှ (၁၅)နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းအားကိုယ်ဝန်(၄)လ ရှိသည်ထိ အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု မှော်ဘီမြို့နယ် ဝါးနက်ချောင်းကျေးရွာနေ အဖ ဦးသန့်ဇော်ဝင်း အသက် ၃၈သည် ၄င်းသမီးအရင်းဖြစ်သူ မ====အား အကြိမ်အကြိမ်အခါခါ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အိမ်ရှေ့၌သားဖနှစ်အတူရှိစဉ်အဖေဖြစ်သူ ဦးသန့်ဇော်ဝင်းမှ အိမ်ထဲရှိ […]
စက်ရုံစီမံကိန်းဝင်းအတွင်းရှိ ကားများနှင့် အဆောက်အဦများအား ဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု
By Uptodate MMPosted on May 14, 2019
အောင်သပြေရွာအနီးရှိ ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းဝင်းအတွင်းရှိ ကားများနှင့် အဆောက်အဦများအား ဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပွား ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အောင်သပြေရွာအနီးရှိ ဘိလပ်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းဝင်းအတွင်းရှိ ကားများနှင့် အဆောက်အဦများအား စီမံကိန်းအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသူများက ဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ယနေ့(မေ ၁၅) နံနက် ၈ နာရီကျော်အချိန်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း […]
ကျပ်(၁၀၀၀)တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆု တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
By Uptodate MMPosted on April 30, 2019
ထီဆုများကို အထူးဆုအနေဖြင့် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆု ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု၊ ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်မှ ကျပ်သိန်းငါးရာဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ရာဆု၊ ကျပ်သိန်းတစ်ရာဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်ဆု၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ဆုများနှင့် ဝေဝေဆာဆာ ဆုမဲများဖြစ်သည့် ကျပ်သုံးသိန်းဆု ကျပ်နှစ်သိန်းဆု နှင့် ကျပ်ငါးသောင်းဆုများကို […]
အသက် ၆ နှစ်အရွယ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေးငယ်လေးကို လယ်ကွင်းထဲခေါ် မုဒိန်းကျင့်မှု
By Uptodate MMPosted on April 28, 2019 April 28, 2019
၆ နှစ်​သမီး​လေးကို..လယ်​ကွင်းထဲ​ခေါ်သွားပြီး…မျက်​နှာကိုလက်​သီးနဲ့ ထိုး..လည်ပင်း​ညှစ်​ပြီး အဓမ္မဆန်စွာပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား… ရန်​ကုန်​​ရေ…​လာပြန်​ပြီ သက်​ငယ်​မုဒိမ်း..ဒဂုံအ​ရှေ့ (၁၄ )ရပ်​ကွက်​မှာ.(၂၇.၄.၂၀၁၉)ရက်​​နေ့ ည.(၁၂း၄၀ )ချိန်​..၆ နှစ်​သမီး​လေးကို..လယ်​ကွင်းထဲ​ခေါ်သွားပြီး…… မျက်​နှာကိုလက်​သီးနဲ့ ထိုး..လည်ပင်း​ညှစ်​ပြီး.အဓမ္မမဆန်စွာဖြင့်​.​ကာမရယူ လူမဆန်​တဲ့လုပ်​ရပ်​နဲ့ထားပစ်​ခဲ့တယ် က​လေးသတိရချိန်​မှာ ပြန်လည်ေ​​​တွ့ရှိပြီး….. ဒဏ်​ရာ​တွေနဲ့ သင်္ဃန်းကျွမ်း​ဆေးရုံကြီးပို့​ဆောင်​ချိန်​..အခင်းဖြစ်​အရပ်​ စစ်​​ဆေးခဲ့တဲ့ ဒဂုံအ​ရှေ့ […]
တောင်​ကြီးမြို့ မင်္ဂလာလမ်း ကံသာရပ် မြင်းဖြူ ၂​ကောင်း​ဆေးတိုက်​ မှာ ​လေး​လောင်းပြိုင်​ လူသတ်​မှုကြီးဖြစ်
By Uptodate MMPosted on April 27, 2019
တောင်​ကြီးမြို့ မင်္ဂလာလမ်း ကံသာရပ်​ မြင်းဖြူ ၂​ကောင်း​ဆေးတိုက်​ မှာ ​လေး​လောင်းပြိုင်​ လူသတ်​ မှုဖြစ်​ပွား လင်​မယား ၂​ယောက်​ အိမ်​​ဖော်​ လသားက​လေးတ​ယောက် Credit Yu Yu Lwin တောင်ကြီးမြို့.ကံသာရပ်ကွက်တွင် ၄ လောင်းပြိုင် […]
သူများကျတော့ ဓါးနဲ့ခုတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုတယ် သူ့ကျတော့ မလုပ်ပါနဲ့တဲ့
By Uptodate MMPosted on April 26, 2019 April 26, 2019
ဈေးဝယ်သူတစ်ယောက်ကို ဓါးနဲ့ခုတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုပြေးသူနှစ်ယောက်ကို ပြည်သူများက ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီး ရဲလက်မအပ်ခင် ထိထိမိမိ ဆုံးမပေးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် တစ်ခု ပြန့်နှံ့လာတာတွေ့လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကြည့်ပြီးတဲ့ ပရိသတ်ကြီး ဒီပို့ကို မျှဝေပေးကြဗျာ..။ အခုလို အချောင်သမားတွေ ဒီလို ခံရမှ […]
တောင်ငူ ခရိုင်တရားရုးံရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု…..
By Uptodate MMPosted on April 13, 2019
တောင်ငူ ခရိုင်တရားရုးံရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု….. ဧပြီလ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၃၀ ဝန်းကျင်အချိန်က တောင်ငူခရိုင်တရားရုးံရှေ့တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ရင်ရင်းအေး (မူလတန်းပြ ) I(သက်) […]
By Uptodate MMPosted on April 7, 2019
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြိုင်​မြို့နယ် ပုသိမ်​-မုံရွာလမ်းမမှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ဆီဘောင်ဆာယာဉ်နဲ့ လိုက်ထရက်ယာဉ်တို့ တိုက်မိတဲ့အတွက် ခရီးသည် ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီ ၇ ရက်​​နေ့ […]